Maxaa ka socda Jiidaha dagaalka ee ay ku dagaalamayaan PL & SL? – Puntlandtimes
Maxaa ka socda Jiidaha dagaalka ee ay ku dagaalamayaan PL & SL?
May 17, 2018 W LAASCAANO
TUKARAQ(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanada gobalka Sool ee ay ku dagaalamayaan ciidamada Puntland & Somaliland ayaa sheegaya in xaaladihii ugu dambeeyey ay yihiin kuwa xambaarsan dhiilo colaadeed, isla markaasna cabsi weyn laga qabo dagaal rasmi ah oo bilowda saacadaha nagu soo beegan.
Wariyaasha ayaa loo diiday in ay labada dhinacba tagaan maanta, waxaana la arkayey ciidamada oo isku guuraya, iyadoo cabsi laga qabo dagaal toos ah oo ka bilowda goobahan.
Ciidamada Difaaca ee Puntland ayaa markale horumar ka sameeyey agaaga dagaalka, waxayna maleeshiyada Somaliland xalay si dhuumasho ah uga baxeen mid kamid ah saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaanka Tukaraq dhabarkiisa galbeed.
Bixitaanka maleeshiyadan ayaa ka dambeysay ka dib markii ay ogaadeen in ciidamo katirsanaa kuwa Difaaca ee Puntland ay garab dhaafeen, ayna ku jiraan labo ciidan dhexdooda, sidaas oo kalena hubka culus ayaa wali laga maqlayaa agaaga oo dhan.
Gurmadyo xoog badan ayaa u imaanaya labada dhinacba, waxaana qolo kasta ay isku diyaarinaysaa dagaal ay ku qabsato magaalada Laascaanood, qolana ku difaacato, waxaana muuqata in Saan-Saanta dagaalku ay gaartay halkii ugu sareysay.
SI AD U HESHO WARKA U DAMBEEYA RIIX HALKAAN